Dagaal dhex maray ciidamada Koofur Galbeed iyo kuwa Al-Shabaab | KEYDMEDIA ONLINE
Dagaal dhex maray ciidamada Koofur Galbeed iyo kuwa Al-Shabaab
Dagaal socday muddo saacado ah ayaa wuxuu ku dhexmaray ciidamada maamul goboleedka Koofur Galbeed iyo Ururka Al-Shabaab, dagaalkaasina waxa uu ka dhacay Saldhig boolis oo ku yaal magaalada Xudur.
BAKOOL - Soomaaliya: Wararka aynu ka heleeno magaalada Xudur ee xarunta gobolka Bakool ayaa waxay sheegayaan in kooxda Al-Shabaab ay weerar ku soo qaadeen Saldhig ku yaal degmada, waxaana halkaasi ka dhacday is rasaaseen socotay muddo saacado ah oo u dhaxaysay labada dhinac. Ururka Al-shabaab ayaa soo weeraray saldhigga, "waxaan ku sugnaa meel u dhaw saldhigga booliska degmada Xudur, waxaan dareemay in xabaduhu yihiin iska hor imaad toos ah oo laba dhinac ah" sidaas waxaa yiri qof shacaba oo ku sugnaa halka uu weerarku ka dhacay.
Dagaalka ayaa la isku adeegsaday hubka noocyadiisa ah, waxaana la xaqiijiyay ilaa dhowr madaafiic in la is dhaafsaday labada dhinacba, waxaana jira qasaare ka dhashay dagaalka inkastoo weli aysan maamulka koofur galbeed ka hadlin dhinacooda qasaare soo gaaray hadduu jiro. magaalada Xudur ayaa daggan hadda. waxaana ka socda magaalada baaritaan ay ciidamada maamulku ka wadaan degmada Xudur kaasoo lagu xaqiijinayo amniga sidoo kalena lagu baadi goobayo dagallamayaashii qeybta ka ahaa dagaalkii dhex maray iyaga iyo Al-Shabaab.
Ma jiro qasaare ka soo gaaray dadka deegaanka ee ka ag dhawaa halka la isku dagaalay, saraakiil ka tirsan ciidamada maamulka koofur galbeedna waxay sheegeen in ay iska caabiyeen koox dooneysay in ay saldhigga qabsadaan, warar aan la xaqiijin ayaa waxay sheegayaan in dagaalka ay qeyb ka ahaayeen ciidamo uu hoggaamiyo Sheekh Mukhtaar Roobow Abuu mansuur oo u xiran dowladda soomaaliya sanadkii labaadna xabsi ku jiro.